Rasaasa News – Jxwo-shiil, oo Caafimaadkiisa Laga Dayrinayo
Jxwo-shiil, oo Caafimaadkiisa Laga Dayrinayo
on June 3, 2011 1:19 pm
London, June 3, 2011 [ras] – War aanu ka helay magaalada London ee dalka Ingriiska, ayaa sheegaya in Jwxo-shiil, uu aad xanuunsan yahay, si gaar ahna looga hayo labxada, xubnaha laabma iyo Indhaha, inkasta oo marmar badan la geeyey Isbitaal, hadana wali wax isbadal ah lagumahyo. Dhakhaatiirta la tacaalaysa xanuunkiisa waxay kula taliyeen in uu joojiyo dheefta la shiilay iyo in dhaqdhaqaa uu wsameeyo maadaama uu da,a yahay.
Sida la sheegay dhawr goor, oo hore ayaa adaado dabiiba loogu yeedhay, maadaama uu isagu aaminsan in xanuunkiisa uu sabab u yahay dhibaatooyin iyo xaqdaro badan oo uu gaystay.
Waxaa la ogsoon yahay in Jwxo-shiil, ka go,ay dhamaanba dhexgalka bulshada, ka dib kolkii uu gaystay dambiyo badan oo dilal ah. Isaga oo aad uga cabsanaya in wax la yeelo ayuu naftiisa ku khasbay in uu guriga dhaxfadhiyo had iyo goor, waxaa kale oo xidhiidhkoodii jaray saraakiisha Somalida ah ee ay wada shaqayn jireen, sumcad xumo haysata darteed.
Dambiile, Jwxo-shiil, xidhiidhka kaliya ee uu leeyahay ayaa ah, xubno tiro yar oo kooxdiisa ka tirsan, kuwaas oo uu bahdil badan ku hayo oo aan waba dhaamin qoftiisa, ayaa kolka uu rabo waxaa uu ugu yeedhaa qolkiisa. Xubnahaas ayaa qaata amarada uu siiyo khalad iyo sax, in kasta oo qaar ka mid ah xubnaha ay ku soo giirteen hada.
Wararku waxay intaas ku darayaan in labada xubnood ee ku hadhay haatan Jwxo-shiil, ay yihiin Qaaxo iyo Macalin Durane, oo ayagu ah da,a uu hadal jecayl ka soo hadhay, waxyaabaha qaarkoodna aan lahaynba maskax ay kaga dhawrsadaan.
Mr. Qaaxo, oo aanu safarkiisa, qodob gaar ah ku soo qaadan doono dhamaadka todobaadkan, ayaa isku dayaya in uu fuliyo amarkii Jwxo-shiil, siiyey oo ahaa; dadkiina keena ama ka taga meesha, ayaa isku dayaya in uu helo maangaab uu ku siro qaraabonimo iyo wax aan jirin.
Jwxo-shiil, ayaan laga sugaynin in ay xabadi ku disho dalka, in uu sariir disheed dibad ku dhinto mooyee.